Wasaaradda Deegaanka & Isbadelka cimilada oo Golaha wakiiladda u gudbisay cabasho kusabsan Siyaasadda Biyaha Puntland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasaaradda Deegaanka & Isbadelka cimilada oo Golaha wakiiladda u gudbisay cabasho kusabsan Siyaasadda Biyaha Puntland.
Wasaaradda Deegaanka & Isbadelka cimilada oo Golaha wakiiladda u gudbisay cabasho kusabsan Siyaasadda Biyaha Puntland.
August 20, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Wasaarada Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland ayaa qoraal ku saabsan cabasho ay ka qabto siyaasada Biyaha ee Puntland oo dhawaan la ansixiyey u gudbisay golaha wakiilada DPL.
Warqadan cabashada ah ayey Wasaaradda Deegaanku ku sheegtay in xeerka Biyaha Puntland oo ay dhawaan ansixiyeen golaha Wasiiradu uu xadgudub ku yahay habka maaraynta Biyaha Puntland.
Xeerka biyaha ayaa dhamaan biyaha iyo maamulkooda hoos gaynaya Hay’adda biyaha ee PASWEN, iyadoo horey u maamuli jirtay biyaha hoose ee dhulka oo kaliya, sida Ceelasha,waxaana uu meesha ka sarayaa xeerkani masuuliyadii wasaaradda ee ahayd maamulidda biyaha lakabka sare ee dhulka.
Wasaaradda Deegaankuna ayaa iminka maamusha biyaha sare gaar ahaana dhismayaasha kaabayaasha biyaha ee biyo xireenada, biyo-weecinta iyo xurfooyinka, taas oo ay wasaaraddu horey uga dhistay in kabadan 12-Biyo xireen oo waawayn iyo xurfooyin yaryar oo intaas kabadan.
Fiiro gaara – Lifaaqa Hoose waxaa ku qoran cabashada wasaarradu ugudbisay golaha wakiilada iyo degrootooyin ay qoreen Madaxaweynaha Puntland Dr. Abdiweli Maxamed Cali Gaas & Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole,kuwaas oo cadaynaya doorarka ay kala leeyihiin hay’adaha kaladuwan ee dawlada Puntland.
Kalfadhiyadda barlamaanka Puntland waxaa fadhi kasta loogu soo gudbiyaa cabashooyinka & talooyinka xad dhaafka ah ee ku adan khilaaf masuuliyiin,labo hay’adood oo dowli ah,waxanna fadhigaan oo gabogabo ah cabashooyinka layaal kamid ah cabashada wasaaradda degaanka & isbadelka cimiladda ee kusabsan hanaanka maamulidda biyaha.